( ဇာတ်လမ်း ) ၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( ဇာတ်လမ်း ) ၁	30
( ဇာတ်လမ်း ) ၁
Posted by တောင်ပေါ်သား on Mar 7, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 30 comments
( ဟော ဦး ဒီကားနဲ့ပါလာတာလား )
( သြော် ဟုတ်တယ် )
( ထမင်းချိုင့် မပါဘူးလား )
( အင်း ဆိုင်မှာပဲ ဝယ်စားတာ )
( ပိုကုန်တာပေါ့ ၊ အမျိုးသမီးက မထည့်ပေးဘူးလား )
( ဘယ်က ဘာအမျိုးသမီး ဘာမိန်းမမှ မရှိပါဘူးဗျာ )
( အမယ် ဟုတ်လို့လား ဦးရယ် )
( ဒါ လိမ်စရာလားဗျ ၊ ကိစ္စသေးသေးလေးကအစ ဦး မလိမ်တတ်ဘူး )
စကားပြောရင်း လှိုင်မင်းလဘက်ရည်ဆိုင် ရောက်လာပါတယ် ၊ ဒီတစ်ခါ သူရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ ကတိနဲ့ အတူ ဝင်ထိုင်ဖြစ်ပါတယ် ၊
( ဒါနဲ့ ဟိုနေ့တွေက နွယ့်ကို မတွေ့မိဘူး )
( သြော် ဟုတ်တယ် ၊ နယ်မှာ စေ့စပ်ပွဲသွားတာ )
( ဟင် ဘယ်လို ဘယ်လို စေ့ စေ့စပ်ပွဲ သွားလုပ်တာ ဟုတ်လား )
သေပြီထင်တယ်ဗျာ ၊ စ စမယ် မကြံသေးဘူး ၊
( ဘာလို့ ဒီလောက်လန့်သွားးတာလည်း ဦးရဲ့ ၊ နွယ့်အမ စေ့စပ်တာပါ )
( အမယ်လေး ၊ လန့်တာ မပြောနဲ့လေ ၊ နွယ်ပြောတာက စေ့စပ်ပွဲသွားတာဆိုတော့ )
( အင်းလေ ၊ စေ့စပ်ပွဲသွားတာပါဆို )
ကိုယ့်ခေါင်းထက်ကြီးတဲ့ အလုံးကြီး ရင်ဝကနေ ပြန်ကျသွားသလိုပဲ ၊
( နွယ့်အမက နွယ်တို့မြို့မှာပဲ ဆရာမ လုပ်နေတာ ၊ သူနဲ့ စေ့စပ်တာကလည်း မြို့ကပါပဲ )
( သြော် ကျောင်းဆရာပဲလား )
( မဟုတ်ပါဘူး ၊ ကုန်သည်ဆိုပါတော့ ၊ သူ့သမီးလေးက အမဆီမှာ ကျူရှင်တက်တယ်လေ )
( အန် ဘယ်လို ဘယ်လို )
( သြော် အဲ့တစ်ယောက်က မိန်းမဆုံးထားတာ ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က ၊
ဒီ သမီးအကြောင်းပြုပြီး အမနဲ့ စသိခဲ့တာ ၊ သူတို့ စ ကြိုက်တော့ အဘ နဲ့ အမေက တားသေးတယ် ၊
နောက် တကယ်ကို ချစ်နေကြမှန်းသိလို့ သဘောတူလိုက်တာ ၊
အမကလည်း ခေါင်းမာတယ်လေ ၊ ဝါမဝင်ခင် လက်ထပ်ကြလိမ့်မယ် ၊ )
( အင်းပေါ့လေ ၊ တကယ် ချစ်တယ်ဆိုတော့လည်း )
( အဲဒါ တကယ် ချစ်တာလား အနေနီးသွားလို့လား ဟင် )
( အနေနီးရာက အမက ဟိုလူကို သံယောဇဉ်ရှိသွား ကိုယ်ချင်းစာသွား
ကလေးကိုလည်း သနား အဲဒီကနေ စတာနေမှာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား )
ပြောသာပြောနေရတယ် ၊ ဘယ့်နှယ် ဒီဇာတ်လမ်းမျိုးနဲ့မှ တိုးရတယ်လို့ ၊
အေးလေ ဒီလို သံယောဇဉ်အချစ်မျိုးကို
နွယ် လက်ခံသွားရင်လည်း ကိုယ်နွဲရမယ့်တိုက်ပွဲမှာ အပေါင်းလက္ခဏာ ဖြစ်လာစေမှာလေ ၊
( ကဲ ဦး နွယ်ကချည်းပြောနေ ၊ ဦးအကြောင်းပြောဦးလေ )
ဘုရား ကယ်တော်မူပါ ၊ ဘာက စ ပြောရပါ့မလဲ ? ညာာလို့လည်း မဖြစ် ၊
( အင်းးး ဦးဘဝက သိပ်အထူးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ၊ မိန်းမ ရခဲ့ဘူးတယ် ၊
အယူအဆ အတွေးအခေါ် မတူလာကြတော့လည်း ကွဲတာဟာ အကောင်းဆုံးပဲ လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ကျော် ၆ နှစ်က ကွာရှင်းခဲ့ကြတယ် ၊ ဟောဒီ ဦးဖုန်းစခရင်ပေါ်က ပုံဟာ ဦး သားပါ ၊
သားကို အုပ်ထိန်းခွင့်ရဖို့ ဦး တောင်းဆိုခဲ့ရတာ ၊
ဒီအတွက် ဦး ပေးဆပ်လိုက်ရတာက ကားတစ်စီး ဆိုပါတော့ ၊ ဦးက ကားတစ်စီးထက် သားသမီးကို ပိုမက်တယ်လေ )
( သြော် မေးမိတာ ဆောရီးနော် ၊ နွယ် တကယ် စိတ်မကောင်းပါဘူး )
( ဘာ စိတ်မကောင်းစရာ ရှိလို့လည်း ၊ မနေနိူင်တော့လို့ ကွဲတာ အဖြေမှန်ပဲ ၊
အဲ တကယ် ချစ်ရက်နဲ့ အချစ်မခံရတာကမှ ကြေကွဲစရာ မဟုတ်လားနွယ် )
( အင်း ဟုတ်ပါတယ်လေ ၊ ဒါဖြင့် ဦး နောက်အိမ်ထောင် ပြုဦးမှာလား ဟင် )
( ဦးကလည်း ချစ်မယ် ၊ ဦးအချစ် နဲ့ ဦးဘဝကိုလည်း နားလည်နိူင်သူမျိုးနဲ့ တွေ့ရမယ်ဆိုရင် ဦး တစ်ဘဝလုံး ပုံပေးလိုက်မှာပါ ၊ )
( သြော် အင်းပေါ့ အင်းပေါ့ ဟော ဦး ၉ နာရီထိုးတော့မယ် ၊ ရုံးထဲ ဝင်စို့နော် )
Alinsett@Maung Thura says: ရုံးထဲ ပြန်အထွက် ညနေခင်းမှာ …ဘာလား ညာလား..
အဲဒါကို ထပ် စိတ်ဝင်စားနေပြန်ပါပြီ…
တောင်ပေါ်သား says: ဒီညနေဇာတ်လမ်းကို တနင်္လာနေ့မှ ဖတ်ပေါ့ကွယ် ၊ ညနေ တွေ့ပဲတွေ့ပါစေဦး ၊
တိမ်မည်း says: ဇာတ်လမ်း ၁ ဆိုပဲ စောင့်ဖတ်နေမယ်ဗျို့။
ခင်ဇော် says: ဘွလုံး ပုံတော့မယ် ဆိုဗျဲ။
ဒေးလီး ဇာတ်ကွက်လေးတွေ သိရတော့မယ်ပေါ့။
နက်ဖြန်ကျ သူ့ ထမင်းနဲ့ စားဖို့ ဟင်းလေး တစ်ခွက်လောက် ချက်သွားလိုက်။
တောင်ပေါ်သား says: Tomorrow is Sunday ? Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ဂလိုဆို နက်ဖြန်ချက်ထားပြီး မန်းဒေး ယူသွားလိုက်။
ဒါဆို Live လွှင့်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်း ပေါ့ လေ။
ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ ကိုမျိုး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ဟိုက်​ လျှာလပတ်​ရည်​ အဲ့ဂ​လောက်​ဂျီး ​ရောက်​​ရောက်​ချင်း ​ဆောက်​နဲ့ ထွင်းပစ်​ရလားဟင်​ အဆက်​မကြည့်​ရဲဘူး​နော်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: ဆက်ပါဦး ဆက်ပါဦး ၂ကလေးကို
sorrow says: .အခုက ခြုံခိုတိုက်တဲ့အဆင့်မဟုတ်တော့ဘူး…. မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအဆင်ဖြစ်နေတယ်… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်လေကောင်းလေပဲ .ဘ၀အကြောင်းတောင်မေးနေတယ်…ဆိုတော့ကာ..သူကလဲစိတ်ဝင်စားပုံပါပဲ..နက်ဖြန်လက်ဖမ်းကိုင်ပလိုက်တော့ …အ၀င်လေးက သင်းနေပြီအစ်ကို … ဖြစ်နိုင်တယ်..အဟိဟိ..
မြစပဲရိုး says: ဟေး …
ဘာတွေ ချွန် နေတာတုန်း။
တော်ကြာ ဟိုက ပါးကို ပြန်နမ်း သွားဦးမယ်။
sorrow says: အရီးလေးရယ်…Who , Braves are loved တဲ့ဗျ… ရဲရင့်တဲ့လူတွေပဲ အချစ်ခံရတာ… အစ်ကို…နားမယောင်နဲ့ …ကျော်ပြောတာမှအမှန်..ကိုယ်တွေ့ .အောင်မြင်ထားတဲ့ ပရိုဖိုင်ရှိတယ်ဗျ…. အဟိဟိ
အောင်ပွဲဆိုတာ ရဲရင့်သူတွေ အတွက်ပဲ။
Mr. MarGa says: ဒီလူရီး​ပြောတာ ကန့်​ကွက်​ရန်​မရှိ
မြစပဲရိုး says: ကိုယ်တော် စော – ဒီမှာတော့ ဇာတ်လမ်း ဆက် မလာသေးပါလား။ ဖြေဆေး ဆောင်ထားပေရော့။
kai says: နွယ်နဲ့သူ့ဇတ်လမ်းမှာ…
ဦးကျောက်ခဲ says: အဟိ … အဟိ … တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဂဇက်မှာတက်ပြီးနည်းပေးရရင်…
ဦး… ဘွက အဲ့လိုမို့ ဦး… ကို လက်တွဲနိုင်မည့်သူ မရှိနိုင်ပါဘူးလို့… လှော်…
ဟာ ဦးကလည်း . အချစ်ဆိုတာ ဒါတွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ … ပြန်ပြောလိမ့်မယ် …
အဲ့ကြရင်… ဆိုင်ပါတယ်လို့ ပြန်ငြင်း… နာနာငြင်း …
နောက်ဆုံးမှ … နွယ်သာ အဲသည့်နေရာမှာဆို ဘီလိုစဉ်းစားမလဲ … ဆိုပြီး ချုပ်လိုက်…
ခင်ဇော် says: အဲ့ ချုပ်နည်းကြီး ကြားဖူးသလိုလိုပဲ။
ဦးကျောက်ခဲ says: ရှူး… တိုး တိုး …
မန့်ပြီးမှ ဒီချုပ်နည်းကို သိသူတွေရှိမှန်း သတိရ… ခွိ
pooch says: တတ်လည်း တတ်နိုင်တဲ့သူတွေ နိုင်ဘူး သူတို့ကို Was this answer helpful?LikeDislike 1317
Crystalline says: အာ့နည်းကြီးက သများလည်း ကောင်းကောင်းကြားဖူးနေပါတယ်.. Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: သားလေး လဲ မကြားစေနဲ့။ lol:-))))
Mike says: .အော်…ကိုမျိုး အချစ်တွေမကုန်နိုင်သေးပါလားနော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1078
sorrow says: အောင်မြင်သွားပြီထင်တယ်… စာမလာ သတင်းမကြား… ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း… အဟိဟိ
တောင်ပေါ်သား says: သူနဲ့ မဆုံဖြစ်သေးပါ ၊၊
ရုံးလာတာလည်း မတွေ့ မနက်ဖြန် တိုက်ကင်းထွက်မည် ၊
Wow says: အသေတော့ဟိုက မလုပ်လိုက်ဝူးမလားဟင်င်င် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ယနေ့မနက် တွေ့
အခြေအနေ ကောင်းနေဆဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1078
sorrow says: . ဒီလိုပါခင်ဗျ .. ..တစ်ခါသား ကျော်လေ..မုန့်တခုအလွန်စားချင်ဗျ..တောင်းစားတယ်..မရ…အရမ်းချိုချိုသာသာရှင်းပြတယ်… …ဘယ်လိုစားချင်တာပါဆိုပြီး..မရ….အဲ့တာနဲ့..ဗြတ်ဆို..ဆွဲလုပြီး..ပါးစပ်ထဲ ပလုတ်ကနဲ ..ထည့်ပစ်တာ..ပိုင်ရှင်ဘာဆိုဘားမှမတတ်နိုင်..ပါးစပ်လေးဟပြီး..ကြောင်သွားယုံအပြင် .အဟိဟိ…ဆိုတော့ကာ.
..တစ်ခါတလေ တောင်းနေတာထက်..ဆွဲလုပြီး ပါးစပ်ထဲပစ်ထည့်ပလိုက်တာ ပိုထိရောက်ကြောင်း…အဟိဟိ
sorrow says: လက်ဖမ်းကိုင်ပလိုက်နော်… အစ်ကို…သိလား..အဟိဟိ..အခုခေတ်က လက်ရဲဇတ်ရဲတွေမှ အဆင်ပြေတာ …
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်း လွမ်းခန်းတော့မပါစေနဲ့ဗျာ